Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiil Oromo Ah oo Kabaxsaday Ciidanka Itoobiya.
Saraakiil Oromo Ah oo Kabaxsaday Ciidanka Itoobiya.
Posted by ONA Admin	/ June 9, 2015
Wargayska Minilik Salsawi ee afka Axmaariga kusoo baxa ayaa qoray in ay 9 sarkaal oo kasoo jeeda Qowmiyada Oromada ka baxsadeen ciidamada Itoobiya. Saraakiishan ayaa waxay ka baxsadeen qaybta Koonfur Bari ee ciidamada Itoobiya. Warku wuxuu intaas raaciyay in aagii ay saraakiishan ubaxsadeen loodiray ciidamo aad utiro badan oo ku raadjooga saraakiishaas baxasatay.
Ciidamadan ayaa ka tirsanaa ciidamada OPDO ee Qowmiyada Oromada oo qiyaas ahaan gaadhaya 40% ,guud ahaan ciidamada Itoobiya, kuwaasoo ay ku shaqaysato ururka TPLF, oo aad u difaaci jiray danta ururkaas ayaa baryahan danbe looga shaki qabaa ineey kudhex milmeen ururka gobanimo doonka ah ee Oromo Liberation Front (OLF).
Saraakiishan ka baxsaday xukuumada Itoobiya ayaa waxay ahaayeen sarkiil meeqaan sare ku leh dhinaca hogaaminta ciidamada islamarkaana xog badan hayay gaar ahaan qaybta Koonfur Bari. Saraakiishan baxsaday ayaa waxaa ka mid ahaa 1. Kornayl Yaasin Xuseen 2. Konayl Nagara Idasa 3. Kornayl Nuuru Asli. Wargaysku wuxuu intaas kudaray in todobaadyadii udanbeeyay ay dagaalo ba’ani dhex mareen dagaalyahanada ururka OLF & ciidamada Gumaysiga Itoobiya Itoobiya.
Baryahan danbe ayaa waxaa aad usoo xoogaysanaya dagaalada ay kula jiraan jabhadaha hubaysan ciidamada dawlada Itoobiya, halkaasoo khasaare laxadleh loo gaystay ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee mooraal jabka ah.